Gini mere ejiri kwuo na oke ohia na - edozi ihu igwe nke uwa? | Network Meteorology
Gini mere ejiri kwuo na oke ohia na - edozi ihu igwe nke uwa?
Ohia mmiri nke ebe okpomọkụ. Ọtụtụ ahịhịa ndụ nke na-enye ọtụtụ ụdị ahụhụ, nnụnụ, na ụdị anụmanụ ndị ọzọ dị iche iche, dị ka enwe ma ọ bụ òké. Ndikere mban̄a enye etie nte ndap, sia idụhe ebiet en̄wen ke ofụri ererimbot emi ekemede ndikot ofụm oro asanade ke adan̄aemi enemde utọ idaha oro. Ma, You maara na ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ndụ dị ka anyị si mara ya ga-enwe ọtụtụ ihe isi ike ịdị adị?
Ọ dị ezigbo mkpa, na a na-ekwu na oke mmiri ozuzo na-achịkwa ihu igwe ụwa. Ka anyị chọpụta ihe kpatara ya.
1 Ebee ka a na-ahụ ọhịa mmiri ozuzo?
2 Kedu ihe kpatara eji ekwu ha na-edozi ihu igwe?
Ebee ka a na-ahụ ọhịa mmiri ozuzo?
Mgbe ha kpuchiri ụwa dum, ugbu a anyị nwere ike ịhụ ha naanị na mpaghara dị n'etiti Tropic of Cancer na Tropic of Capricorn. N’ebe a ka ụzarị anyanwụ na-abata n’enweghị nsogbu ọ bụla karịa n’ụwa niile, ebe ọ nọ nso ya. Maka otu ihe kpatara ya, ọnụọgụ nke awa nke ọkụ kwa ụbọchị anaghị agbanwe n'afọ niile, nke mere na ihu igwe na-anọgide na-ekpo ọkụ ma kwụsie ike, na-enweghị nnukwu ọkụ ọkụ.
Iji nwee ike ịhụ ha, anyị nwere ike ịga Afrịka, Eshia, Oceania, Etiti na Ndịda Amerịka, ma ọ bụ bụrụ ndị akọwapụtara nke ọma: Brazil, Democratic Republic of the Congo, Indonesia, Peru or Colombia, tinyere ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ha bi naanị 7% nke ụwa, ha na-achịkwa ihu igwe nke ụwa dum.
Kedu ihe kpatara eji ekwu ha na-edozi ihu igwe?
Ka ntụpụ na-etolite, ọ chọrọ isi ihe ọ ga-eme, ma ọ bụrụ na uzuzu sitere na ikuku, sọlfọ nke si n'oké osimiri, ma ọ bụ ọbụna aerobacterium. Ohia mmiri ozuzo na-ewepụta ọtụtụ ijeri mbara igwe a na mbara igwe, ọkachasị site na osisi sara mbara.. Ha na-agha igwe ojii, si otú ahụ na-enye ọtụtụ mmiri ozuzo n’ụwa. Ajụjụ bụ, olee otu?
Typesdị nje ndị a maara nwere protein nke na-eme ka mmiri kpọnwụọ na okpomọkụ dị elu karịa ka ọ dị na mbụ. Site n'inwe ike ibili na ikuku ikuku, ha na-akpali oke mmiri igwe ojii na oke okpomọkụ karịa ka ọ ga-adị. Na-akpali mmasị, nri? Ma a ka nwere ihe ndị ọzọ.
Nnukwu alụlụ mmiri nke na-epupụta akwụkwọ na-emepụta igwe ojii, nke bụ ihe na-enye ụfọdụ akụkụ ọkụ nke ụwa ume. Igwe ojii a na-ekpuchi oghere nke okpomọkụ nke na-erute anyị site na Sun, si otú a na-edozi okpomọkụ na-adịgide adịgide.
Maka ihe a niile, ọ dị ezigbo mkpa ka anyị chebe ha, n’ihi na ọ bụ otu n’ime ụzọ kacha mma anyị ga-esi echebe onwe anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Gini mere ejiri kwuo na oke ohia na - edozi ihu igwe nke uwa?
Ohere ifufe, ndị iro dị jụụ nke ụwa
Mgbe mmiri ozuzo yiri ka ọ sitere na ihe nkiri dị egwu